अष्ट्रेलियाको डलर त्यागेर स्वदेशमै व्यवसाय संचालन गरिरहेका एक युवाको सफलताको कथा - Arthasansar
अष्ट्रेलियाको डलर त्यागेर स्वदेशमै व्यवसाय संचालन गरिरहेका एक युवाको सफलताको कथा
मंगलबार, २० माघ २०७७, १६ : १४ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय रोजगारी नपाएर विदेश जानेहरुको लर्को नै छ नेपालमा । दैनिक हजारौं युवाहरु रोजगारीको लागि देश छोडेर परदेश जाने गर्छन् । नेपालमै केहि गरौँ भन्ने युवाहरुको संख्या निकै कम छ । देश हाक्ने युवाहरु विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । अझ अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत युरोपेली देशहरुमा जानेहरुको त होडबाजी नै छ । उनीहरु उतै सेटल हुन चाहन्छन् ।
तर एक युवा जो ५ वर्षसम्म अष्ट्रेलियामा बसेर आफ्नै देश फर्किएर व्यवसाय गरी युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । उनी हुन् गोकर्ण हिलसाइड रिसोर्टका संचालक संजिव चालिसे । हजारौं युवाहरुको मोह विदेशतिर ढल्किरहेको बेला उनको यो कार्यले आफ्नै देशमा केहि गरौँ भन्ने युवाहरुलाई भने प्रेरित नै गर्दछ ।
अरुको देशलाई धनी बनाउनुभन्दा आफ्नै देशमा केहि गरौँ भन्ने सोचले विदेशको मोह विदेशमै त्यागेर स्वदेश फर्किएका चालिसेले अहिले २२ जना युवाहरुलाई रोजगारी समेत दिइरहेका छन् । उनले गोकर्णेस्वर नगरपालीकास्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोकर्णमा आफ्नो रिसोर्ट संचालन गर्दै आइरहेका छन् । उनले विगत २ वर्षदेखि उक्त रिसोर्ट संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।
विदेशमा सिप र अनुभव बटुलेर स्वदेश फर्केका उनी व्यवसाय गर्नुअघि आफुले गर्नुपूर्व के काम कसरी गर्ने , के गर्दा ठिक होला, के गर्दा सफल भइन्छ भन्नेबारेमा अध्ययनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । विदेशमा गर्ने दुख यहि गर्ने हो भने त्यहाँ जति नै कमाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
कामलाई सानोठुलो भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै युवाहरु बाहिरिएको उनी बताउँछन् । यदि युवाहरुमा केहि गरौँ भन्ने भावना छ भने आफ्नै देशमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आफ्नै देशलाई माथि उठाउने समृद्ध बनाउने प्रमुख दायित्व युवाहरुको नै हुने गर्दछ तर पछिल्लो समय घरदेश छाडेर परदेशतिर लाग्नेहरुको लाम नै छ । देश हाक्ने युवाहरु आफ्नो परिश्रम परदेशमा बगाइरहेका छन् । उनीहरुलाई लागि संजिव चालिसे प्रेरणाका स्रोत हुन् । जसले युरोपियन देशमा गएर त्यहि बसोबास गर्छु भनेर सपना देख्नेहरुलाई राम्रो पाठ सिकाउँछ ।
कथा प्रेरणाको आजको अंकमा उनै संजिव चालिसेको भोगाई, संघर्ष अनि सफलताको कथालाई प्रस्तुत गरेका छौं :-
चलाखीपूर्ण लगानीले खर्बपति: सेयर बजारको बादशाहदेखि बदनामसम्मको एक पात्र हर्षत मेहता
'पेनपछि प्लेजर अवश्य आउँछ, तरलताको अभाव र अर्थतन्त्रका समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ'
चुनावपछिको सेयरबजार: बढे कति पुग्ला? घटे कति झर्ला? (भिडियो)
अपरेटरले खेल्न सक्ने वातावरण बनेको हो? हाईड्रोपावर सेक्टरको चिरफार (भिडियो)
ब्याजदरको निर्धारण बजारलाई स्वतन्त्रता दिईयो भने सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? (भिडियो)
अहिले सेयर किन्ने बेला हो भन्नुमा दुबिधा छैन : अजय सिंह थापा (भिडियो)